'फुटेर होइन जुटेर आइटी क्षेत्रको विकासमा लागौं' - Hello Samaj
‘फुटेर होइन जुटेर आइटी क्षेत्रको विकासमा लागौं’
यदि तपाईं सूचना प्रविधिप्रेमी हुनुहुन्छ र नेपालमै वा नेपाल बाहिर बसेर पनि नेपालका लागि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो लेख सान्दर्भिक हुने विश्वास लिएको छु । १४ वर्षयता आइटीलाई मुख्य आधार मान्दै मैले व्यवसायिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । आइसिटीमा समान सहभागिता, डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, इन्डस्ट्री एकाडेमिया कोल्याबोरेशन, आइटी गभर्नेन्स, गर्ल्स इन आइसिटी, आइसिटी इन स्किल एन्ड एजुकेशन, साइबर प्रोटेक्सन आदि विषय र मुद्धामा म विभिन्न फोरम र कम्युनिटीमार्फत् काम गरिरहेको छु । यी काममा मैले कम्युनिटीबाट धेरै सहयोग प्राप्त गरेँ, जसले अझै मलाई योजनाबद्ध रुपले लाग्ने प्रेरित गरेको छ ।
मैले त्यो काम गर्दा कम्युनिटीबाट धेरै राम्रो सहयोग प्राप्त गरेँ । जसको लागि म हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु । २०११/१२ देखि नै म अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा पनि उति नै सक्रिय रहेको छु । हाल सोही क्रममा युके सरकारले आइटी नेतृत्व र सीप विकासको अवसर पनि दियो । साथै म यहाँ नेपालदेखि आबद्ध भएका संस्था DigitAll, United Network र अन्यमा पनि उतिकै सक्रिय भूमिका खेल्दै छु । यहाँ पनि मैले उत्तिकै साथ र सहयोग पाएको छु, जसको लागि मा युकेका साथीहरु र युके सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
डोटी, हुम्लादेखि महेन्द्रनगर, विराटनगर, इलामसम्म र अमेरिका, अस्ट्रेलियादेखि युरोप (युके)सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि नेपालमा गर्न बाँकी काम धेरै छन् । २०२० होइन , अर्को २०३० सम्म गरेर नसकिने कामहरु छन् । यदि नेपालमा केही गर्ने नै हो भने भाषणबाजी छोडेर प्राविधिक काम गर्न जरुरी मैले ठानेको छु । क्रमिक रुपमा मेरा आइटीका कुरा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत छन्, जसका लागि म अहोरात्र २०३० सम्म नेपालमा खट्नेछु :
1. IT Academia Industry Tie Up
2. International Payment Gateway Integration
3. IT Entrepreneurship & Innovation
5. Software Development and Quality Control
6. Web and E-commerce
7. Integration of Geo spatial system, Network, Database, Software for Smarter City
8. Collaboration with Regional, National Government and International Leading forums
10. P2P & IoT Compliances, Legal issues, Data Migration
11. IPV6 Implementation
12. DNS over HTTPS
13. Safe Routing and Threat Monitoring/Control
14. Cloud Selection as per agency, implementation, maintenance and security
15. Digital Divide -on the top of everyone BIG CHALLENGE FOR NEPAL
16. Transparent Digital Government
यो सबै गर्न हामीलाई दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । त्यसकारण जनशक्ति विकासको शिक्षा, इन्डस्ट्रीको प्रयोग, उचित नीति र यसकाे कार्यान्यवन महत्वपूर्ण पाटो हो । जति हामी नेपाली छौ (देश/विदेशमा), मिलेर २०३० सम्म आइसिटीलाई एउटा साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य (Sustainable Development Goals), ग्रामीण विकास, उद्यमशीलता र वैज्ञानिक युगको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
अब गर्ने भनेको तपाई हामी मिलेर नै हाे । त्यसकारण कम्बाइन्ड इफाेर्ट अत्यन्त जरुरी छ । सरकार, शैक्षिक संस्था, उद्योग, दक्ष जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय योजना र collaboration/strategy सका सही सूचक हुन् । माथि प्रस्तुत १६ मध्ये दुई वटा मात्रै योजना कार्यान्वयन राम्ररी गर्ने हो भने देशले वैज्ञानिक युग र आईटीमा फड्को मार्न सक्छ । त्यसकारण हामी फुटेर होइन जुटेर लाग्नुपर्छ ।
स्थानीय निकायमा यसरी बढाऔं सूचना प्रविधि
क्यान महासंघकाे अध्यक्षमा यस कारण मेराे उम्मेदवारी
बालबालिकालाई प्रविधि : कलिलाे दिमागमा असर, अश्लिल सामाग्रीमा नजर